Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Oktobra 2018 à 08:07
77 octets ajoutés , il y a 1 an
Nanatsara sy nanisy rohy
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Oktobra 2018 à 18:47 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Oktobra 2018 à 08:07 (hanova) (esory)
k (Nanatsara sy nanisy rohy)
Ny [[monofizisma]] na [[Monofizisma|monofizitisma]] dia firehana ao amin'ny [[Kristianisma|finoana kristiana]] izay manaikymampianatra ny maha Andriamanitratsy anfananan'i [[Jesosy|Kristy]], izay atao hoe koa Zanaka na ny Teny, nefa mampianatra ny tsy fananany natioran'olombelona fa natioran'Andriamanitra ihany. Natelin'ny natioran'Andriamanitra ao aminyamin'ny Zanaka ny natioran'olombelona. MifanohitraNoho izany dia mifanohitra amin'ny atao hoe ''diofizisma'' na ''diofizitisma'' ny monofizisma. Hatramin'izao dia mbola misy ny fiangonana kristiana izay atao hoe monofizita.
Ho an'ny monofizisma dia tsy manana afa-tsy natiora tokana i Kristy, dia ny maha Andriamanitra azy. Ny samy monofizita dia misy zavatra tsy itovizany hevitra koa, dia ny amin'ny tsy mahamety lo ny vatan'i Kristy (talohan'ny nandaminan'izy ireo izany fifandirana izany talohan'ny fidiran'ny Arabo tao Siria sy Ejipta izay ahitana azy ireo betsaka). Nanomboka tamin'ny taona 560 dia nisy andiany fahatelo nipoitra, izay nihevitra ireo persona telon'Andriamanitra ho andriamanitra telo samy hafa. Fampianaran-diso izany hoy ireo firehana kristiana hafa rehetra.
== FanamelohanaFanamelohan'ny konsily ny monofizisma ==
Tao amin'ny Fiangonana kopta sy teo amin'ireo mpianatr'i Eotikesy avy any Konstantinopoly no tena nampatanjaka ny monofizisma. Noho izany dia napotraky ny Fiangonana Lehibe ka nisaraka taminy ireo monofizita tamin'ny taonjato faha-6.
Tamin'ny endriny atao hoe miafizisma dia ampianarin'ny Fiangonan'ny konsily telo ny monofizisma. Ireto avy ireo Fiangonana monofizita izay atao hoe koa [[Fiangonana tsy Kalkedoniana]]: ny Fiangonana apostolika armeniana, ny Fiangonana kopta ortodoksan'i Ejipta, ny Fiangonana kopta ortodoksan'i Etiopia, ny Fiangonana siriaka ortodoksa (na jakobita) ary ny Fiangonana sirianan'i India Atsimo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/884202"